Waze Local: Avelao ny mpamily Waze hahita ny orinasanao rehefa manodidina | Martech Zone
Alarobia, Desambra 14, 2016 Alarobia, Desambra 14, 2016 Douglas Karr
Isaky ny miditra amin'ny fiarako aho, ny zavatra ataoko voalohany dia ny mampifandray ny findaiko ary manokatra ny App Waze. Io dia mihoatra ny endri-javatra rehetra an'ny Google (tompony) ary tsy hahavery anao toa an'i Apple… mandritra ny loza mitatao sy fifamoivoizana eny an-dàlana. Raha manana tongotra mavesatra ianao ary mahita fa mahazo tapakila, tena manampy satria afaka mitatitra sy mahita fandrika hafainganam-pandeha notaterina ianao. The manao tsinontsinona an'i Waze ny polisy.
Waze dia manolotra fahitana ambony kokoa amin'ny orinasa Waze Local. Mametraha teti-bola isan'andro sy sokajy orinasa ary ampiroboroboana ny tampon'ny asa ataon'ny mpamily ny orinasanao. Miharihary ihany koa ireo mpanjifa akaikin'ny orinasanao marika amin'ny marika izay manamarika ny toerana misy anao amin'ny sari-tany. Rehefa mikitika ny valiny ny mpampiasa dia omena fampahalalana bebe kokoa izy ireo ary voatosika hitety na hitahiry ilay toerana.
Waze Local dia manome dashboard ahafahan'ny orinasa:
Jereo ny zava-bitan'ny orinasany isan'andro
Araho ny firotsahana an-tsokosoko, ao anatin'izany ny fitetezana sy ny fitsitsiana
Vaovao farany ny famoronana, ny toerana misy ny orinasa ary ny teti-bola
Ny vidiny dia maodely CPM ho an'ny $ 2 isan'andro ary vola isaky ny volana amin'ny carte de crédit anao.
Soraty ny raharaham-barotrao
Raha orinasa manana toerana mihoatra ny 10 ianao, dia afaka mampiasa ihany koa Waze Ads. Ny interface dia manolotra pin misy marika, fakana sary amin'ny finday, zana-tsipìka ary fametrahana valim-pikarohana malaza ao anatin'ny fampiharana finday. Azonao atao koa ny mikendry ny karazana mpamily sy ny toerana itondrany, ary izay mitranga manodidina azy ireo (toy ny toetr'andro!).
Tags: mitondra fiaradokam-barotrafaritratsaokaMapWiktionarydokambarotra wazewaze eo an-toerana
Dec 15, 2016 amin'ny 10: 22 AM
Waze dia afaka nanao asa tsara lavitra kokoa noho ny fanehoana mpandeha an-tongotra, fiara, bisikileta ary fiaran-dalamby mora tratran'ny lozam-pifamoivoizana. Manana ny angona izahay.
Dec 15, 2016 amin'ny 11: 03 AM
Jeff, trolling ve ianao amin'ny varotra? Raha izany, kudos! 🙂